यी हुन् नीताका नयाँ जोडी ! « Ramailo छ
यी हुन् नीताका नयाँ जोडी !
प्रकाशित मिति : Feb 9, 2018
चैत २ गते फिल्म ‘पञ्चायत’ प्रदर्शनको पर्खाइमा रहेकी नायिका नीता ढुंगाना नयाँ फिल्ममा अनुबन्धित भएकी छन् । प्रि-प्रोडक्सनमा रहेको ‘पारस’ नामक फिल्ममा नीताको जोडीको रुपमा नायक प्रज्जवल सुजल गिरी प्रस्तुत हँदैछन् ।
‘कान्छी’ का सेकेण्ड लिड सुजल ‘पारस’ मा भने नीताको अपोजिटमा प्रस्तुत हुन लागेका हुन् । नीता आफैंले पारसमा आफ्नो जोडी प्रज्जवल रहेको खुलाएकी हुन् । प्रज्जवल र नीता पहिलो पटक एकसाथ फिल्ममा काम गर्दैछन् ।
पारसलाई यसअघि फिल्म ‘किङ्ग’ बनाएका जयन श्रेष्ठले बनाउन लागेको नीताले खुलाईन् । उनी आफैंले बनाउने फिल्मको भने स्क्रिप्ट छान्ने कार्य भैरहेको छ । नीतासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :